Nyaya yeMatabeleland Yopesanisa Vakuru muZanu PF
Chikunguru 11, 2011
Vatungamiri vebato reZanu PF mudunhu reMatabeleland vanonzi vakaumba makomiti mashanu achaongorora nyaya dzebudiriro pamwe nehupfumi mudunhu iri kuitira kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa zvimhingamupinyi zvinonzi zviri kusangana nedunhu iri munyaya dzebudiriro.
Makomiti aya akaumbwa pamusangano weMatabeleland Joint Regional Development Indaba wakaitirwa paElangeni Training Centre muBulawayo mukupera kwesvondo.
Makomiti aya anoti komiti inoona nezveupfumi, iyo inotungamirirwa vegurukota rezvemigodhi, VaObert Mpofu, komiti yezvedzidzo, iyo inotungamirirwa naVaSikhanyiso Ndlovu, komiti yezvehutano, iyo inotungamirwa naMai Abigail Dhamasani, komiti yezvemvura, iyo inotungamirwa naAmai Judith Ncube, uye yezvebudiriro yezvivakwa, inotungamirwa naMai Faith Mpofu.
VaMpofu vaudza Studio7 kuti makomiti aya ari kutarisirwa kuita hurukuro nemapoka akasiyana siyana, izvo zvichazoburitsa zvisungo zvinozotambirwa zvisati zvasvitswa kuhurumende.
VaMpofu vati hutungamiri hwebato ravo muMatabeleland hwakatambira zvichemo zvekusarira shure kwedunhu iri zvaibva muvanhu, izvo zvakazoita kuti vaumbe makomiti aya. Musangano uyu waikokerwa nemumwe mutewedzeri wemutungamiri wenyika, VaJohn Nkomo.
VaNkomo vakati dunhu reMatabeleland haringanzi harina kubudirira, asi kuti mudunhu iri muzere vanhu vane hunyope.
Zvinonzi muZanuPF hamuna kubatana panyaya iyi, vamwe vachiti zviri kuitwa naVaMpofu, zvinoita kuti vanhu vapatsanuke, izvo zvinodzosera nyika shure. Vamwe vanotiwo Matebeleland harisi iro chete dunhu risina kubudirira munyika, sezvo mamwe matunhu akaita seMashonaland East, Mashonaland Central nemamwe, asina budiriro ingataurwe nezvayo.
Vamwe muZanu PF vanoti nyaya iri kusimbirirwa naVaMpofu nevamwe vavo ichaita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka muZanu PF.
Nyaya yeMatabeleland inonzi yambotaurwa nazvayo muZanu PF neMuvhuro, vamwe vakaratidza kushushikana zvikuru nechinanagwa chiripo.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, vatiwo danho rotorwa nehutungamiri hweZanu PF muMatabeleland iri ndere kuda kukwezva rutsigiro vachishandisa nyaya yebudiriro senzungu iri parihwa riri kuda kubata mbeva.